“Akekho oyongiyekisa insangu” - eMtee
UMREPHA u-eMtee, uthi kunabantu abacindezela umculo wakhe emisakazweni. Isithombe: Twitter
Charles Khuzwayo | March 23, 2021
ISIHLABANI se-hip hop, uMthembeni "eMtee" Ndevu, uthi kulilimazile igama lakhe emphakathini ukubhecwa ngokuthi udla izidakamizwa. U-eMtee (28) waseMatatiele, KwaZulu-Natal, ubalule ukuthi umzansi Afrika wonke uyazi ukuthi yena uzihuqela insangu kuphela.
"Anginamahloni ngalokho. Ngiyazi umphakathi awukayamukeli insangu njengogwayi osemthethweni. Yingakho abantu bengixhumanisa nezidakamizwa." Uthe ubhekene nempi enkulu selokhu athatha isinqumo sokuzimela. "Kunabantu abakhokha emisakazweni ukuba umculo wami ungadlalwa. Abantu bazitshela ukuthi angiqophi kanti ngisaqhubeka nokuqopha umculo wami. Usemnandi njengasekuqaleni kodwa awudlalwa emisakazweni."
Uthe inhliziyo yakhe ibuhlungu ngoba kunenqwaba yabantu abamkweletayo. "Abanye abangikweleti imali kodwa bangikweleta izihe engibenzele zona." Uthe ngenxa yokuthi akasiye umuntu ophiwe ukukhuluma, uthathe isinqumo sokwenza ingoma ephume izolo esihloko sithi Laqhasha napike kuyo uLolly noFlesh.
"Nami ngiqoqa ngayo izikweleti. Ngiyibhekise kubo bonke abantu abangikweletayo. Ngifuna bangikhokhele." Uthe lo mucwi ulandela awukhiphe ezinyangeni ezedlule othi Ithemba futhi lezi zingoma zizobe ziyingxenye ye-albhamu yakhe ezophuma ngo-Ephreli esihloko sithi Logan.
Eqhuba uthe leli cwecwe uliqambe ngendodana yakhe yesibili uLogan. Kuzokhunjulwa ukuthi eyokuqala yango2015 eyayithi Avery, yayiqanjwe ngendodana yakhe. Abaningi bazoyikhumbula ngamanoni ayethi Roll Up, Pearl Thusi nelalithi We Up. Uthe nakule abantu abalindele ubumnandi bodwa njengoba inezingoma ezingu-18.
"Kulena ngibuye ngavezela abalandeli bami elinye ikhono ebebengalazi ngami, lokucula. Abantu abazi ukuthi mina ngangicula futhi ngibhidisa ikhwaya esikoleni futhi ngangicula nebhendi. Bazokuzwa konke lokhu kule-albhamu."
Esephetha ubonge abalandeli bakhe noNkulunkulu ngokuwa bevuka naye kwaze kwalapha.